Iingcebiso zokuphucula ukuThengiswa kweSoftware yakho ngexesha leeholide | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-6 kaDisemba ngo-2016 UMehul Rajput
Intengiso yeApple ihlala iyinto ephambili ekunciphiseni ii -apps eziqhelekileyo ezivela kwii -apps eziyimpumelelo. Iphulo elilungileyo lokuthengisa alinakwenza kuphela ukuba imveliso inomdla kodwa likwazise ekuqwalaselweni ngabantu abaninzi. Kwaye ngamanye amaxesha, zizonke iimfuno zeapp. Zininzi ii -apps ezilungileyo ezingafumani phantse uninzi lwazo njengoko kufanelekile kuba iphulo labo lokuthengisa lalingenanto okanye lingachanekanga ekubambiseni ubume beapp.
Ngokuza koNyaka oMtsha ngokunjalo, uninzi lwabantu luya kuthenga iifowuni ezintsha, ekufuneka zibuyisele usetyenziso lwazo. Eli lixesha elilungileyo njengalo naluphi na ukuqala ulondolozo kwi-app yakho kwaye uqiniseke ukuba eyakho iphakathi kwesoftware egqithiselwa ngaphezulu kwaye ingalahlwa nje. Kweli nqaku, ndiza kube ndikhangela ezinye iindlela ezintle zokwenza Abaphuhlisi beapps ukusebenzisa ixesha leholide elizayo kuluncedo lwabo kunye nokunyusa ukusebenza kwazo zonke iiapps zabo kwimarike ngokuthengisa okugxilwe kuko.
Isithonjana soSetyenziso lweSelfowuni: Impembelelo yakho yokuqala
Xa ukhangela ivenkile yeapp, into yokuqala oyiphawulayo yile Isoftware icon. Lo mfanekiso mncinci unokwenza umahluko phakathi komntu ocofa kwiapp yakho okanye aqhubeke nokukhangela. Ngokuqinisekileyo wonke umntu ukhe wahlangabezana nemeko apho banokutsiba bejonga iapp kuba yayine icon enesisombululo esisezantsi esingathandekiyo. Ukuza nomfanekiso okhangayo, opholileyo oya kuthi wandise inani lokubetha kwii -apps zakho.
Ubuhle buyinto yonke, kwaye wonke umntu uyatsalwa yiyo. Kungenxa yoko le nto intengiso yeapps kufuneka ibe kwinqanaba. Nje ukuba ivulwe, iphepha lesicelo sakho kufuneka liqhubeke apho i icon ihambe khona. Abaphuhlisi kufuneka babonelele ngezinye iifoto zescreen esibonisa ukuba le app imalunga nantoni, kunye ne usetyenziso lwevidiyo yedemo Ecacisa ngakumbi izibonelelo zokukhuphela usetyenziso, ngendlela ekholisayo.
UkuPhakanyiswa kweSicelo seSelfowuni: Dlala kumandla akho
Iiholide zikufuphi kwikona, Oku kuthetha ukuba uninzi lwabantu luya kutshintsha ukugxila kwabo kwinto yesiqhelo abayenzayo okanye ukukhangela kwizixhobo zabo kwizinto ezinxulumene neeholide ezizayo. Eli lithuba elihle lokuba wandise ishishini. Ngelixa ixesha leholide liqhubeka, kubalulekile ukuba uqonde ukuba abantu baya kuba yintoni emva koko, kwaye uzame ukuphumeza olo lwazi kwi-app yakho kunye nenkqubo enokubonelela ngayo abathengi ngoku kunakuqala. Eminye imizekelo inokunikezela ngeentengiselwano kwizinto ezinxulumene neeholide ezinje ngemveliso yokuhombisa iKrisimesi Ukuba uphuhlise iapps yokuthengisa.
Nantoni na evela kwizaphulelo zemveliso kunye nentsebenziswano nabanikezeli beenkonzo ezifanelekileyo zeholide ukunika usetyenziso lwakho iiholide ukuba zinokukunceda ukonyuse ii-app kunye nomsebenzi womsebenzisi. Malunga nokugqibela, licebo elilunge kakhulu ukuhlengahlengisa usetyenziso lwakho ukuze lube semoyeni weKrisimesi, yiyo le nto wonke umntu ayifunayo ngeli xesha. Ukuba usetyenziso lwakho ngumdlalo weselfowuni, ungongeza umxholo weKrisimesi kubalinganiswa bakho okanye kwiindawo, okanye usebenzise inqanaba lomxholo weKrisimesi.
Iintengiso zeApple: IiTweak zokuDlala amaXesha
Kubalulekile ukuba unike ingqwalaselo yokuba ixesha leholide lithetha ukuba abantu abaninzi bazakuchitha ixesha elininzi emakhaya ngesiqhelo. Oku kuthetha ukuba ngelixa ukhangela i-intanethi okanye usebenzisa ii -apps, baya kuthanda ukubukela intengiso kuphela kuba ixesha labo abalichithe kwizixhobo lenyuke kakhulu. Ingumbono olungileyo ukuguqula ukuba iintengiso zakho zidlala rhoqo njani kwi-app yakho ukuze zingabi yingxaki kumsebenzisi. Ukufumana ibhombu kwintengiso efanayo imini yonke kuya kwenza ukuba umsebenzisi ayeke imveliso yakho iyonke, kungasathethwa ke ukujongana nemicimbi yakho emnandi yeholide.
Ukhuphelo losetyenziso lweSelfowni: Lungelelanisa ukungeniswa kwabaThengi
Ixesha elizayo liya kuba lixesha lokwabelana kunye nokunika izipho abantu obathandayo. Oku kuthetha ukuba inani elikhulu labantu liya kufumana iifowuni ezintsha. Kwakhona, kuxhomekeke kubume beapp yakho, iiholide ziya kukonyusa ikepusi lakho lomsebenzisi ngokwendalo. Oko kuthetha ukuthini ukuba inani elikhulu labasebenzisi abatsha lihamba ngendlela yakho. Lithuba elihle ukongeza ukuthengisa okutsha kwi-app, ezinje ngeentengiselwano ezipholileyo zabasebenzisi abatsha okanye ezinye iipakeji ezigxininisa kumsebenzisi ukuba mtsha.
Oko bekutshiwo, abaphuhlisi bee-app banomsebenzi wabo owenzelwe bona. Ixesha leholide ayisiyonto yokoyikiswa ngumvelisi weapp, kodwa kunoko yinto ekufanele ibonwe njengomceli mngeni wokukhula. Elona candelo lililo kukuba umjikelo uyakuphinda kwaye unyaka nonyaka uya kuba nokuqonda ngakumbi ngendlela yokujongana neeholide.
tags: ukudlala intengisoicon iconintengiso yeholide yokuthengisa usetyenzisoIntengiso yesoftwareIxesha lesikhangiso sesoftwareukuthengisa usetyenziso lweselfowuniapps mobileiifowuni ezintsha
UMehul Rajput yi-CEO ye IngqondoInkampani ebonelela ngeenkonzo zophuhliso lweeapps kwii-iOS nakwiiplatifomu ze-Android zabaxhasi behlabathi. Uyakuthanda ukubhala kubuchwephesha beselfowuni, ukukhula kweapp, ukuqala, ukurhweba kunye nentengiso yeapp. Uhlala enegalelo kuShishino, HuffingtonPost, Business.com, TechCocktail, SiteProNews, Inc42, Business2Community nabanye abaninzi.
Ngomhla wama-8 ku-Disemba 2016 ngo-2: 15 AM
Eyona elungile! Enkosi ngokwabelana ngalo mxholo ufundisayo.
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2016 ngo-4: 13 AM
Umbono omninzi malunga nentengiso yeapps. Ukongeza imixholo yamaxesha onyaka kwiapp ngokuqinisekileyo kuya kukhulisa usetyenziso lweapp.